नजिक न्युज | दक्षिण एसिया र तालिबानबारे कसरी प्रस्तुत होलान् बाइडन ?
दक्षिण एसिया र तालिबानबारे कसरी प्रस्तुत होलान् बाइडन ?
काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले पदभार सम्हालेसँगै अब अमेरिकाको नीति विश्वभर कस्तो रहला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । के बाइडनको कार्यकालमा अमेरिकाले दक्षिण एसियाप्रतिको नीति फेर्ला त ? एशियाली मुलुकहरुमा यसबारे चासो बढेको छ ।
अनुदारवादी नेताको छवि बनाएका डोनाल्ड ट्रम्प हटेसँगै अब अमेरिकाको विदेश नीति परिवर्तन हुन सक्ने अपेक्षा छ । यद्यपि केही नीतिहरुलाई भने बाइडनले पनि निरन्तरता दिने बताइसकेका छन् ।
दक्षिण एसिया अमेरिकाका लागि सधैँ महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । विशेषगरी पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकमा चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेकाले पनि यो क्षेत्र उसका लागि महत्वपूर्ण बनेको हो ।
अमेरिकाको टि्वन टावरमा आतंकवादी आक्रमण हुनुभन्दा पहिला आतंकवाद नियन्त्रण, सैन्य र सहयोगमा पाकिस्तान अमेरिकाको महत्वपूर्ण साझेदार मुलुक थियो । तर, त्यसयता भने अमेरिकाले पाकिस्तानमाथि आतंकवादलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
यसअघि अमेरिकाले पाकिस्तानलाई आर्थिक सहायता दिँदै आएकोमा ट्रम्पले त्यसलाई रोकिदिएका थिए । चीनसँगको बढ्दो मैत्रीसम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै बाइडनले पाकिस्तानलाई उक्त सहयोग पुनः नदिन पनि सक्छन् ।
दक्षिण एसियामा भारतसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध बाइडनको कार्यकालमा पनि महत्वपूर्ण रहने छ । चीनविरुद्धको नीति कार्यान्वयनका लागि पनि अमेरिकालाई भारतको साथ चाहिने भएकाले बाइडनले पनि भारतलाई साथै लिएर अघि बढ्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
बाइडनको कार्यकालमा पनि चीन अमेरिकाका लागि सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्छ । भारतले रुससँग हतियार खरिद गरेको लगायतका विषयमा अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आए पनि दक्षिण एसियामा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव कम गर्न भारतसँग सहकार्य गर्नु बाइडनका लागि महत्वपूर्ण हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।
बंगलादेश दक्षिण एसियाको उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको मुलुक हो । तर, उसको अमेरिकासँगको आर्थिक कारोबार भने सीमित छ । यस्तोमा बाइडनको कार्यकालमा बंगलादेशसँग पनि अमेरिकाको आर्थिक सम्बन्ध थप विस्तार हुन सक्ने अपेक्षा छ । पछिल्लो समय बंगलादेशको चीनसँगको सम्बन्ध पनि बढ्दो क्रममा रहेकाले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार हुनेमा आशंका भने कायमै छ ।
हिन्द महासागरको रणनीतिक हिसाबमा निकै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अवस्थित श्रीलंकामा अहिले चीनको राम्रो प्रभाव छ । बाइडनलाई श्रीलंकामा प्रजातन्त्रको पक्ष बलियो बनाउँदै चीनको प्रभाव सीमित पार्नु पनि एक चुनौती हुनेछ ।
दक्षिण एसियामा नेपाल, भुटान र माल्दिभ्ससँगको सम्बन्ध भने बाइडनको कार्यकालमा पनि समान रहने पक्काजस्तै छ । ट्रम्पका पालामा पनि यी मुलुकको सम्बन्धमा खासै उतार-चढाव नदेखिएकाले बाइडनको कार्यकालमा पनि यो नीति कायम रहनेछ ।
अफगानिस्तान र तालिबानसँगको सम्बन्ध
बाइडनको कार्यकालमा उनको अफगानिस्तान र तालिबानबारे लिने निर्णय भने अबको चार वर्षका लागि निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । बाइडनले यसअघि तालिबानसँग अमेरिकाले गरेको सम्झौतामा पुनर्विचार गर्ने बताइसकेका छन् ।
तालिबानले ट्रम्पका पालामा भएको सम्झौता पालना नगरेकाले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बाइडनको प्रशासनले बताइसकेको छ । यस्तोमा आगामी दिनमा शान्ति पुनः स्थापना हुने वा युद्ध झन् भयावह बन्ने भन्ने आशंका अफगानिस्तानमा देखिएको छ ।
अफगानिस्तान लामो समयदेखि जारी गृहयुद्धको अन्त्य पर्खिरहेको छ । पाकिस्तानले पनि बाइडनलाई ट्रम्प प्रशासनले तालिबानसँग गरेको सम्झौताबाट बाहिर ननिस्किन अनुरोध गरिसकेको छ । अफगानिस्तानमा शान्ति पुनः स्थापनाको लागि पाकिस्तानको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
यस्तो परिस्थितिमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान र तालिबानलाई मिलाउनु बाइडनको लागि मुख्य चुनौती हुनेछ । यद्यपि बाइडनको प्रशासनले तालिबानसँग हिंसा कम गर्ने, आतंकवादी संगठनसँगको साँठगाँठ घटाउँदै लैजाने र मानव अधिकारको पालना गर्नेलगायत शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शर्तलाई प्राथमिकतामा राखेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
सोमबार १२, माघ २०७७ ०८:३४ मा प्रकाशित
न्युजिल्याण्डमा कोभिडको असर : दर्शकको अनुपस्थितिमा खेलिने, खेलस्थल सारियो
नासाको अन्तरिक्ष यान मंगल ग्रहमा सफल अवतरण